Aoka ho olona manana kintana! Mpianatry ny Master TAI CHI sy Body Combat
Rehefa: 15 Jona 2016
Aiza no misy: "Garden Garden Summer" an'ny club DESIGNER
Adiresy: Kutuzovsky fanantenana, trano 12, fanorenana 3, metro station "Kievskaya"
Fanangonana vahiny ary fiandohan'ny fisoratana anarana amin'ny 18:00. Ny fiantombohan'ny fampiofanana amin'ny 19:00!
Miara-miaraka amintsika amin'ity hariva ity ny mpihira Sati Casanova, ilay mpilalao sarimihetsika Anna Khilkevich, mpanolotra fandaharana amin'ny fahitalavitra Irena Ponaroshku sy ireo kintana hafa!
Reebok dia miantso ny rehetra liana amin'ny kilasy ara-pahasalamana! Azonao atao ary tokony hanatsara ny tenanao sy ny tenanao ary na aiza na aiza. Ny fonosinay dia ny Gym dia eny rehetra eny! Mitadiava izay tianao sy izay tianao! Hanova ny hevitrao momba ny fitantanana!
Ny mpanazatra tsara indrindra dia hanampy anareo amin'izany miaraka amin'ny sarimihetsika malaza Rosiana, mozika ary asehon'ny kintan'ny orinasa izay mizara ny eritreritsika fa tsy hisy ny fahombiazana marina raha tsy misy fanatsarana ara-batana, ara-panahy sy ara-tsaina.
18:00 - 19:00 Fanoratana ny mpandray anjara sy ny fisoratana anarana
19:00 - 20:00 MASTER CLASS LES MILLS Miady mafy amin'ny Evgeny Vanyukov
Mpanazatra antitra sy antokom-pihetseham-batana antitra, mpanazatra ny programa Les Mills Evgeny Vanyukov ho fampandriana mialoha ny fibodoana voalohany dia hitondra fampiofanana ho an'ny Body Combat. Io fandaharanasa io dia novolavolaina noho ny karate toy ny karate, karatra, kickboxing, tai-bo ary taekwondo. Ny fampihetseham-pihetseham-po avy amin'ny fombafomba ara-batana dia mahatonga ny fibodoana tsy hahomby raha tsy mitaky lanjany, fa koa amin'ny fampivelarana ny fahaizanao, ny fahaiza-mandanjalanja sy ny fandrindrana. Hanatsara ny fihazonana ianao, hanamafy ny hozatrao, esory ny lanjesinao sy ny cellulite.
20:00 - 21:00 FAMPIANARANA MASTER avy amin'i THAI Chi avy amin'ny tompony Shi Yanbin
Ny tompony dia iray amin'ireo mpilalao dimampolo dimampolo izay nomena ny zo hampianatra. Nandeha tany amin'ny firenena maro izy niaraka tamin'ireo seminera sy kabary, nampianarina tany Etazonia nandritra ny roa taona teo ho eo, ary tamin'ny 2006 dia nirahin'ny mpitondra tenin'ny monastera Shaolin, Atoa Shi Yong-sin, mba hiasa any Rosia, nahazo tsodrano avy amin'ny Patriarch Kirill. Amin'io hariva io, ny Master Shi Yanbin dia hanao tolotra mandritra ny ora iray ao amin'ny Chen style Taijiquan.
Tranonkala ofisialin'ny tetikasa: http://bmhwithstars.ru/
Plus - plus! Fampiofanana «Reebok MAN WITH STARS» no fomba tsara indrindra ahafahanao ho lasa ampahany amin'ny fiainanao! Raha efa ela ianao te hanova zavatra ao amin'ny tenanao, dia tonga ny andronao. Ampitao ny fivoaran'ny evolisiona ara-pahasalamana ary ho lasa lehilahy iray amin'i Reebok!
Ny fandraisana anjara amin'ny fampiofanana rehetra dia «maimaim-poana ny« REBOK MAN WITH STARS »! Miangavy fotsiny ny fisehoan-javatra eo amin'ilay toerana *, mahazo mari-pahaizana, manonta izany ary ento miaraka aminao.
* Amin'ny fisoratana anarana amin'ny hetsika, manamarina fa mahafantatra sy manaiky ny "Rules of Participation in the Event" nalefan'ny tranonkala ofisialin'ny tetikasa: http://bmhwithstars.ru/
Loham-bolo ho an'ny tovovavy - lamaody lamaody ho an'ny sangisangy sy mamorona indrindra
Fitafy japoney 2014-2015
Kiraro - loha-lohataona amin'ny lohataona 2014
Takelajoro ho an'ny takela-by
Pankakes amin'ny yogourt sy leviora
Poopy ho an'ny volo
Ny fihenan'ny fahasalamana
Shorts amerikana manana tavy ambony
Church of the Skalholt
Soup miaraka amin'ny buckwheat - recipe
Tranoben'ny hazo ao anaty trano maoderina
Sary mampihetsi-po tsy hita maso
Fikarakarana nify mandritra ny fampinono
Kiraro kiraro 2016
Fanomanana ny rindrina ho an'ny tantaram-pako
Ahoana ny fomba hahatonga ny fantsika ho tsara tarehy?
Midika ho lamosina volo
Fanorenana manda - ny fototry ny ao anatiny